डाक्टरकाे सल्लाह बिना आफैं औषधि किनेर खाँदा यति ठूलाे क्ष`ति ! सिटामोल खाएपछि हल्का भएको ज्वरो फेरि अर्काे दिन आयो – Aaj ko Sandesh
मुख्य पृष्ठ /News/डाक्टरकाे सल्लाह बिना आफैं औषधि किनेर खाँदा यति ठूलाे क्ष`ति ! सिटामोल खाएपछि हल्का भएको ज्वरो फेरि अर्काे दिन आयो
काठमाडौं : डाक्टरकाे सल्लाह बिना आफैं औषधि किनेर खाँदा यति ठूलाे क्ष`ति ! बुटवल गोलपार्कका ५८ वर्षीय पुरुषलाई सामान्य ज्वरो आयो । घरमै रहेको सिटामोल खाएपछि हल्का भएको ज्वरो फेरि अर्काे दिन आयो । फेरि औषधि खाए । अर्काे दिन शरीर दुख्यो । अनि सामान्य खोकी पनि लाग्यो । शरीर कमजोर हुँदै गए पनि उनी को- रोना परीक्षण गर्न गएनन् ।
छैटौं दिन उनी उठ्नै सकेनन् । अक्सिजनको तह ८० भन्दा तल पुगिसकेको थियो। परिवारका सदस्यले घरमै अक्सिजन पु-राए दिए तर, उनमा केही सुधार भएन । केही समयमै उनलाई लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल लगियाे । अस्पतालमा भीडभाडले उनले बेड पाएनन् । बेड खोज्दा खोज्दै आधा दिन बित्यो। एम्बुलेन्समा राखिएका उनलाई भैरहवातर्फ लगियो तर, अस्पतालसम्म पुग्न पाएनन् । एम्बुलेन्समै उनको नि- धन भयो ।
यिनै हुन् तपाइको फोन सम्पर्क नहुँदा मा’फ गर्नुहोला भन्ने युवतीहरू : सुन्नुहोस् अहिले पनि उस्तै आवाज ! (भिडियो)